सामाजिक जीवनबाट बालबालिकाहरु कसरी विमुख हुँदैछन् ? | सुदुरपश्चिम खबर
सामाजिक जीवनबाट बालबालिकाहरु कसरी विमुख हुँदैछन् ?
अहिलेका बच्चाहरुलाई विद्यालयमा होस् वा घरमा, सामाजिक आचरण सिकाउनुपर्छ । कहिले सामाजिक काममा लगाउने, कहिले आफन्तकहाँ लाने, कहिले साथीभाईसग घुलमिल गराउने जस्ता काम गर्नुपर्छ । यस्ता कुराले उनीहरुलाई सामाजिक जीवन बाँच्न सिकाउँछ । अनलाइनखबर बाट सभार